'Bryce anokodzera shamwari dziri nani': Vafambi vanorova Noah Beck mushure mekunge anyorera Bryce Hall kuti 'haana kuchengetedzeka' - Pop-Tsika
'Bryce anokodzera shamwari dziri nani': Vafambi vanorova Noah Beck mushure mekunge anyorera Bryce Hall kuti 'haana kuchengetedzeka'
TikToker Noah Beck iri kudhonzwa online mushure mekutora yekuchera pa Bryce Hall .
Wekutanga akange achiti arasikirwa nemarondera emabhizimusi mushure mekutandara nemutambi wetsiva weTikToker, uyo achangobatanidzwa mukukakavadzana kwakawanda, ichangoburwa iri mufashoni mugadziri Mukomana Akanaka Larry .
handina zvinangwa kana zviroto
Chinyorwa chakagovaniswa naNowa Beck (@noahbeck)
Noah Beck akataura zvakadzama nezvehukama hwake naBryce Hall mubvunzurudzo. Zvinoenderana na @tiktokinsiders pa Instagram, akati:
Ini handikwanise kuve mumavhidhiyo akawandisa ne [nhengo dzeSway House], nekuti mabrands anozozviona uye vakaita sekuti, 'Ah, zvakanaka, urikuita izvi naBryce, uye haana kunyanyo chengeteka. .
Kubvunzurudzwa kwakaunzwa mushure mekunge Bryce Hall achangobva kuzivisa kuenda kwake kubva kuTikTok musiki weboka Sway House.
Fans vakaodzwa mwoyo kuona Noah Beck, makumi maviri diss shamwari yake mubvunzurudzo. Vatsigiri vakati wandei wetsiva vakataura, 'Bryce anokodzera shamwari dziri nani'. Vamwewo vakataura kuti Beck angadai asina kuzowana mukurumbira pamhepo pasina rubatsiro rwe Bryce Hall .
Fans vanoita kuna Noah Beck vachirasa Bryce Hall 1/3 (Mufananidzo ne @tiktokinsiders Instagram)
kudzoka sei kune narcissist ex mukomana
Fans vanoita kuna Noah Beck vachirasa Bryce Hall 2/3 (Mufananidzo ne @tiktokinsiders Instagram)
Fans vanoita kuna Noah Beck vachirasa Bryce Hall 3/3 (Mufananidzo ne @tiktokinsiders Instagram)
unodzosa sei mojo yako
Nei Bryce Hall akasiya iyo Sway House?
Iyo Sway House yakatangwa neTalentX Varaidzo, kambani inodzora tarenda iri naBryce Hall, muna Ndira 2020.
Iyo TikTok inogadzira mubatanidzwa yakatanga naJosh Richards, Griffin Johnson, Kio Cyr, Anthony Reeves, Jaden Hossler uye Bryce Hall senhengo. Hossler, Johnson naRichards vakasiya Imba kuti vatevedze mabasa avo zvakasiyana, naBlake Grey naNoah Beck vachivatsiva muSway House.
kevin o leary net yakakosha
Chinyorwa chakagovaniswa naBryce Hall (@brycehall)
Bryce Hall akazivisa muna Nyamavhuvhu 16 muTikTok vhidhiyo kuti achange achisiya Sway House. Zvinotaridza sekunge wekuMaryland-chizvarwa chakadonha nevaaigara navo uye Hall akatendawo kuti ndiye aishanda zvakanyanya nhengo yeTikTok imba.
Bryce Hall akataura zvakadzama nezvekuenda kwake mu Instagram Live:
Kutendeseka ndinoda shamwari shamwari inoshanda. Ini pati, usakanganisa kudaro, ndinopembera dhongi rangu asi hapana anoshanda zvakaoma seni muboka.
Horo yakaunganidza vanopfuura mamirioni makumi maviri vateveri paTikTok yake. Akaenda kungano dzake dze Instagram mazuva mashoma kumashure achitaura kuti aive asina pekugara:
Ini ndakangobuda zvizere muSway House. Ini ndinowana nzvimbo yangu, ndega, musi wekutanga waGunyana, saka ndichave ndichisvetuka-svetuka kwemavhiki maviri kunge f **** ng tsuro. Ndiri munhu mukuru, ndine makore makumi maviri nemaviri, ndiri kugara ndega, ndichiita zvese ndega, uye ikozvino handina shamwari saka ndirove kana uchida kuva shamwari.
NaBryce Hall achibuda muSway House, hazvina kujeka kana Imba icharamba ichishanda semazuva ese.
Ongorora: Chinyorwa ichi chinoratidza maonero emunyori.
sei kurega kuita godo muhukama
goridhe guruva risina kumeso pendi
maitiro ekudzoka kune narcissist
zviratidzo zvekuregeredza muhukama
ndinotaura zvine ruzha ndisingazvizive
kuputsa tsika yekunyepa
maitiro ekuudza kana murume waunoshanda naye achikuda